Moz Yenharaunda: Wedzera Kwako Kwako Kwepamhepo Kuvapo kuburikidza Nekunyorera, Mukurumbira, uye Kupa Management | Martech Zone
Se ruzhinji rwevanhu dzidza nezve uye uwane emabhizinesi emuno online, yakasimba online kuvepo kwakakosha. Mashoko akarurama nezve bhizinesi, mapikicha akanaka emhando yepamusoro, zvitsva zvitsva, uye mhinduro kuongororo zvinobatsira vanhu kudzidza zvakawanda nezve bhizinesi rako uye kazhinji vanoona kana vachisarudza kutenga kubva kwauri kana kukwikwidza.
Kunyora manejimendi, kana ichibatanidzwa nemukurumbira manejimendi, inogona kubatsira mabhizinesi emuno kuvandudza kuwanikwa kwavo pamhepo uye mukurumbira nekuvagonesa kubata zvimwe zvezvinhu zvakakosha kune vese vashanyi uye injini dzekutsvaga. Uine mhinduro dzinoverengeka kunze uko, zvakakosha kuti utarise zvinhu zvakaita sekubudirira, nyore kushandisa, uye mutengo.
Iine otomatiki rondedzero manejimendi uye nzvimbo kugoverwa kwedata kune akawanda masosi pamwe neremana manejimendi, Moz Local inoita kuti iwe ugone kukurumidza kuchengetedza zvinyorwa zvakanaka, kupindura kuongororwa, uye kutumira zvinyorwa uye zvinopihwa. Chishandiso chedu chiri nyore kushandisa chakagadzirirwa kuwedzera kuvapo kwako kwepamhepo online, kuwedzera kubatanidzwa kwevatengi, uye kusimudzira kuoneka kwako mukutsvaga kwenzvimbo uine nguva shoma uye nesimba. Yakavakirwa marudzi ese emakambani, kubva kumabhizinesi madiki kuenda kumabhizinesi makuru, asina kuroorwa kune akawanda-nzvimbo mabhizinesi, uye vamiririri.
Chengetedza Zvakarurama Zvinyorwa
Kune SEO yemuno, yakakwana uye yakajeka zvinyorwa zvinokoshesa. Kuchengeta kero, maawa ekushanda, uye nhamba dzenhare dzinoenderana uye kusvika pari zvino zvakakosha kuti utsvage pamwe neruzivo rwevatengi. Moz Local inokubatsira kuti ugadzire uye utonge zvirinyore bhizinesi renzvimbo paGoogle, Facebook, uye mamwe masosi kubatsira vatengi kuwana uye kusarudza rako bhizinesi.
Iwe unogona kugadzirisa zvese zvako zvinyorwa kubva kune rimwe chete dashibhodhi, uye dzidza kuti ndeapi data, mapikicha, kana zvimwe zvemukati zvinodiwa kuti upedze zvinyorwa zvako uye ma profiles kuitira kuti vatengi vakurumidze kuona zvinoitwa nebhizinesi rako uye kana iri yakakodzera kwavari. Zvinyorwa zvinogoverwa otomatiki kune edu ehukama network, uye neyedu inoenderera zvinyorwa zvinyorwa, zvinyorwa zvako zvinogara zvakagadziriswa pane ese mainjini ekutsvaga, madhairekitori epamhepo, zvemagariro midhiya, maapplication, uye data akaunganidzwa ane mashoma nguva uye nesimba. Uye yedu otomatiki maitiro ekuzivisa, kusimbisa uye kudzima zvakapetwa zvinyorwa zvinobatsira kubvisa kusagadzikana.
Moz Local zvakare inokupa iwe yakakosha mashandiro ekuratidzira, senge iyo Visibility Index, online kuvepo mamaki, uye huwandu hwakazara hwehuwandu. Izvo zvakare zvinokuzivisa iwe kuti utore rinhi nekuzivisa uye zviziviso zvezvinhu zvinoda kutariswa.
Isu tinoshandisa Moz Local kuongorora yedu yekumisikidza chinzvimbo, nyore kuona edu ezvinyorwa 'kuoneka mukutsvaga uye kunzwisisa zvinyorwa zvinyorwa pamatanho akasiyana. Isu takakwanisa kusundira irwo runyorwa runyorwa kune akakosha madhairekitori uye tinofara nezvatinoona.
David Doran, Director weChirongwa pa Oneupweb
Tarisa Wako Bhizinesi Runyorwa mahara
Chengetedza Mukurumbira Wako
Padanho remunharaunda, ongororo dzinogona kuita kana kuputsa bhizinesi Kupfuura 87% yevatengi vakati ivo vanokoshesa kuongororwa kwevatengi uye 48% chete ndivo vanofunga kushandisa bhizinesi rine isingasviki nyeredzi ina. Muchokwadi, mabhizinesi madiki anogona kutadza kuratidza mumhedzisiro yekutsvaga kana ongororo yavo isinga svike chimwe chikumbaridzo.
Ongororo dzakanaka dzinogona kubatsira kuwedzera yako yekutsvagisa chinzvimbo, asi mhinduro yechokwadi kune isina kunaka kana yakavhenganiswa ongororo inokurudzira kubatana kwakawanda nebhizinesi rako pamwe nekupa anoongorora mukana wekuchinja zvibodzwa.
Moz Local inobvumira vashandisi kuongorora zviri nyore, kuverenga, uye kupindura kune ongororo pane ese mainjini uye mawebhusaiti kubva kune rimwe dhibhodhi. Mukurumbira manejimendi wakakosha zvakanyanya kune SEO uye neako marashi, uye Moz Local inotumira chaiyo-nguva yekugadzirisa uye Notices kana ongororo nyowani yatumirwa Pamusoro peizvozvo, iyo dashboard inokutendera iwe kutevedzera maitiro mukati meongororo, kunhonga chaiwo mazwi akakosha uye mavhareji anoratidza kumusoro mune dzakawanda ongororo. Aya maitiro anopa mhinduro yakakosha kubva kune vatengi pane izvo bhizinesi rako riri kuita nemazvo uye zvarinogona kuda kugadzirisa.
Goverana Zvidzoreso & Zvipo
Kubata vatengi kweanopfuura masekondi mashoma kuri kuwedzera kuoma nezuva. Nemamwe akawanda masayiti, zvinongedzo, neruzivo rwunowanikwa pane peji rekutanga remhedzisiro yekutsvaga, kumira kunze kwevakwikwidzi idambudziko.
Izvo zvinoitwa nevatengi kuita uye kubatana nazvo, zvisinei, zvinowanzo gadziriso uye zvinopihwa. Kuchengeta vatengi mukati mekuziva nezvenhau dzichangoburwa nezve bhizinesi rako, zvigadzirwa zvitsva kana masevhisi, kana zvipo zvakakosha zvinogona kuvakanganisa kutenga kubva kwauri. Iwe unogona zvakare kugovana nhau paFacebook kana kutumira kune Mibvunzo & Mhinduro pane yako Google bhizinesi chimiro kubva kuMoz Local.
Moz Local inokubatsira iwe nyore kubata ako emunharaunda mabhizinesi zvinyorwa uye mukurumbira paGoogle, Facebook uye mamwe masosi kubatsira vatengi kuwana uye kusarudza rako bhizinesi. Yakagadzirirwa kuwedzera kuvepo kwebhizinesi repanzvimbo online, kuwedzera kubatirana kwevatengi, uye kusimudzira kuoneka mukutsvaga kwemuno nenguva shoma uye nesimba.
Isu takawana Moz Local kuve inopenya chikuva chekubatsira kusimudzira kuoneka kwenzvimbo kwevatengi vedu. Neinjini dzekutsvaga dzinogadzirisa zvawanikwa zvichienderana nenzvimbo yemushandisi, Moz Local inogona kukanganisa zvakanyanya kune yakazara organic traffic.
Niall Brooke, SEO Maneja pa Matalan
Tsvaga Zvakawanda Nezve Moz Local
Tags: madhairekitori ebhizinesiunganidza wongororodhairetorizvinyorwa zvinyorwazvemuno zvebhizinesi zvinopihwaratings dzemunowongororo dzemunomukomanamoz yemunomukurumbira manejimendimukurumbira manejimendi chikuvaongorora manejimendi